Wasiirka cusub ee Warfaafinta oo lagu soo dhaweeyay munaasibad aan loo kala hadhin | Salaan Media
Wasiirka cusub ee Warfaafinta oo lagu soo dhaweeyay munaasibad aan loo kala hadhin
Hargeysa, (SM)- Munaasibad ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen ashkhaas tiro badan oo ka mid ah haldoorka Somaliland ayaa lagu qabtay Magaaladda Hargaysa, xafladan oo lagu soo dhaweynayay Wasiirka Warfaafinta, Wacyigalinta iyo Dhaqanka Somaliland, Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse).
Munasibadan ayaa kulmisay, qaar kamid ah Mujahidiintii ugu waaweynaa ururkii SNM, Abwaano, Fanaaniin caan ah, Wasiiro, Xildhibaano Goleyaasha kala gedisan ee Somaliland ka tirsan, bahda Saxaafadda iyo marti sharaf kale. Dadka xafladaa ka hadlay oo u badnaa shakhsiyaad masuuliyiin ah, waxay Madaxweynaha dhammaantood ku hambalyeeyeen magacaabista uu jagadan Warfaafinta u Magacaabay Cabdillaahi Cukuse, iyagoo sheegay inuu yahay shakhsi ku mudan kuna haboon, isla markaana aqoonteeda leh.
Mujaahid Axmed Waysacadde oo ka mid ah Golaha wakiillada, kana mid ahaa Mujahidiintii ugu caansana Halgankii ururkii SNM, oo halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. “Wasiir Cukuse wuxuu noqonayaa Wasiirkii ugu horeeyay ee aan Hambalyeeyo, waxaan Madaxweynaha ku bogaadinayaa Magacaabistiisa.”
Sidoo kale Cali Guuleed oo ah mulkiilaha Huteelka Xafladu ka dhacday ee Guuleed, ayaa tilmaamay in Wasiir Cukuse in kasta oo uu yahay Wasiir Qaran haddana uu gaar ahaan yahay Wasiirka reer Hargeysa. “Wasiirka reer Hargeysa ay dhammaantood isku raacsan yihiin ee ay leeyihiin waa Cabdillaahi Cukuse.”. ayuu yidhi Cali Guuleed.
Abwaan Cabdi Qays oo ka mid ah abwaanada waa weyn ee reer Somaliland ayaa isna Wasiirka Gabay ku soo dhaweeyay, iyadoo bahda Fanka iyo Sugaantu si weyn xafladan u soo camireen, Fanaanka Nuur Jaamac Aadan (Nuur Daalacay) iyo Abwaan Cali Seenyo ayaa ka mid ahaa sugaan yahanadii ka hadlay madashaaas.
Sidoo kale xubno ka mid ah Saxaafadda Somaliland, iyo Siyaasiyiin ay ka mid ahayeen Xildhibaano Golaha Wakiilada ku jira, ayaa hadal ka jeediyay munasibadaas, waxayna soo dhaweeyay Wasiirka, iyagoo isla qiray in Wasaaradda Warfaafintu heshay masuulkii ku haboonaa.
Wasiirka Warfaafinta, Wacyigalinta iyo Dhaqanka, oo ugu dambayntii madasha soo afmeeray, ayaa hadalkiisa ku bilaabay.”Waxaan salaamaya dhammaan axsaabta miisaanka culus ee nooc kasta ka kooban, ee Xafladan soo camiray, sidoo kale Waxaan u mahad naqayaa, dadkii faraha badnaa ee ila xalay Website-yada, Wargaysyada iyo Saxaafadda kala gedisan xitaa Axsaabta Facebook’ga lahayd, ee isoo hambalyeynayay, waxaan leeyahay hambalyada iigu dara duco in alle xilka igu asturo ana waan dedaalaya.”
Xafladan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah, ee lagu soo dhaweeyo Wasiirada Cusub ee uu dhawaan Madaxweynuhu isku shaandhaynta ku magacaabay.